Ozi e ziri Eze Ehaz (1-9)
A ga-amụ Ịmanuel iji gosi ihe ga-eme n’ọdịnihu (10-17)
Ihe ga-eme ndị na-anaghị efe Chineke (18-25)
7 N’oge Ehaz+ nwa Jotam nwa Ọzaya na-achị Juda, Rizin eze Siria na Pika+ nwa Remalaya eze Izrel bịara ịlụso ndị bi na Jeruselem agha, ma ha* emerilighị ha.+ 2 N’oge ahụ, a kọọrọ ezinụlọ Devid, sị: “Ndị agha Siria na ndị nke Ifrem agbakọọla aka.” Obi wee malite ịma Ehaz na ndị ya jijiji, otú osisi dị n’ọhịa si ama jijiji ma ifufe fewe. 3 Jehova wee sị Aịzaya: “Biko, gị na Shia-jeshọb* nwa gị nwoke+ gaa hụ Ehaz n’isi isi okpo mmiri nke ọdọ mmiri dị n’ebe mgbago,+ nke dị n’ụzọ e si aga ebe ndị ọsụ ákwà na-anọ asụ ákwà. 4 Sị ya, ‘Echegbula onwe gị. Atụla egwu, ka obi gharakwa ịmapụ gị maka ezigbo iwe Rizin eze Siria na nwa Remalaya na-ewe.+ Ha yiri mkpirisi nkụ abụọ refọrọ erefọ ndị na-akwụ anwụrụ. 5 Ndị Siria na ndị Ifrem na nwa Remalaya akpaala nkata ihe ha ga-eme gị. Ha na-asị: 6 “Ka anyị gaa lụso Juda agha, merie ya* ma bibie ya.* Ka anyị chiekwa nwa Tabiel eze ka ọ chịwa Juda.”+ 7 “‘Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, sị: “Ọ gaghị enwe isi. Ọ gaghịkwa eme. 8 N’ihi na isi obodo Siria bụ Damaskọs. Onyeisi Damaskọs bụkwa Rizin. Tupu afọ iri isii na ise agaa,A ga-akụrisị Ifrem ka ọ gharazie ịbụ mba.+ 9 Isi obodo Ifrem bụ Sameria.+ Onyeisi Sameria bụ nwa Remalaya.+ Ọ bụrụ na okwukwe unu esighị ike,Alaeze unu agaghị esi ike.”’” 10 Jehova gwakwara Ehaz, sị: 11 “Rịọ mụnwa bụ́ Jehova bụ́ Chineke gị ka m meere gị ihe ga-egosi na ihe ndị a ga-eme.+ Ọ bụrụgodị na ị chọrọ ka o mee n’ebe miri emi ka ili,* ma ọ bụ n’ebe dị elu ka mbara igwe, m ga-emere gị ya.” 12 Ma Ehaz sịrị: “Agaghị m arịọ ihe a. Agaghịkwa m anwa Jehova ọnwụnwa.” 13 Aịzaya wee sị: “Ndị ezinụlọ Devid, biko geenụ ntị. Ọ̀ bụ na o zubeghịrị unu na unu na-akpasu mmadụ iwe? Gịnị mere unu ji na-akpasukwu Chineke iwe?+ 14 N’ihi ya, lekwanụ ihe Jehova ga-eme ga-egosi unu na ihe ndị a ga-eme: Nwa agbọghọ ga-adị ime, mụọ nwa nwoke,+ gụọ ya Ịmanuel.*+ 15 Tupu nwa ahụ etoruo mgbe ọ ga-ama otú ọ ga-esi jụ ihe ọjọọ mewe ihe ọma, ọ gaghị ahụ ihe ọzọ ọ ga-eri ma e wezụga bọta na mmanụ aṅụ. 16 N’ihi na tupu nwa ahụ etoruo ịmata otú ọ ga-esi jụ ihe ọjọọ mewe ihe ọma, obodo ndị eze abụọ ahụ unu na-atụ ụjọ ga-atọgbọrọ chakoo.+ 17 Ehaz, Jehova ga-eme ka gị na ndị gị na ezinụlọ nna gị nọrọ ndụ n’oge ihe ga-esi ike otú ọ na-esitụbeghị kemgbe ndị Ifrem hapụrụ ndị Juda nọọrọ onwe ha.+ Ọ ga-ezite eze Asiria.+ 18 “N’oge ahụ, Jehova ga-afụrụ ijiji ndị nọ n’ebe dị anya n’iyi niile na-asọnye n’osimiri Naịl Ijipt mkpọrọhịhị, fụọkwara aṅụ ndị nọ n’ala Asiria mkpọrọhịhị ka ha bịa. 19 Ha niile ga-abịakwa biri na ndagwurugwu nakwa n’ọgba nkume nakwa n’elu osisi ogwu niile nakwa n’elu ebe niile anụmanụ na-aṅụ mmiri. 20 “N’oge ahụ, Jehova ga-eji eze Asiria,+ bụ́ agụba a gbazitere agbazite, nke dị ná mpaghara Osimiri Yufretis, kpụọ gị isi na ajị ụkwụ. Ọ ga-akpụkwa afụ ọnụ gị. 21 “N’oge ahụ, mmadụ ga-azọ nwa ehi si n’ìgwè ehi ndụ, zọọkwa atụrụ abụọ ndụ. 22 Ebe ọ bụ na mmiri ara ehi ga-ehi nne, mmadụ ga na-eri bọta, n’ihi na onye ọ bụla fọrọ n’ala ahụ agaghị ahụ ihe ọzọ ọ ga-eri ma e wezụga bọta na mmanụ aṅụ. 23 “N’oge ahụ, naanị osisi ogwu na ahịhịa ga na-adị ebe ọ bụla a na-enwebu otu puku (1,000) osisi vaịn, ndị ọnụ ahịa ha bụ otu puku (1,000) mkpụrụ ego ọlaọcha. 24 Ndị mmadụ ga-ejikwa akụ́ na ụta gaa ebe ahụ, n’ihi na osisi ogwu na ahịhịa ga-ejupụta n’ala ahụ niile. 25 Mmadụ agaghị eru nso n’ugwu niile a na-ejibu ọ́gụ̀ abọ ahịhịa n’ihi egwu ọ na-atụ osisi ogwu na ahịhịa ndị dị ebe ndị ahụ. Ugwu ndị ahụ ga-aghọkwa ebe ehi na atụrụ na-ata ahịhịa.”
^ O nwere ike ịbụ, “o.”
^ Shia-jeshọb pụtara “Naanị Ndị Fọdụrụ Ga-alọta.”
^ Ma ọ bụ “kụtuo mgbidi ya.”
^ O nwere ike ịbụ, “yie ya egwu.”
^ Ịmanuel pụtara “Chineke Nọnyeere Anyị.”